ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 |3၏စာမျက်နှာ 86 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » ဖေဖေါ်ဝါရီလ (စာမျက်နှာ 3)
လစဉ်မော်ကွန်း: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018
AlertMe ၏အာဒံကို Shapiro အဆိုပါ 2018 NAB Show ကိုပရိသတျနဲ့သူ့ရဲ့နည်းပညာမျှဝေနှင့်ထဲမှာ AlertMe များအတွက်အသုံးပြုမှုကရှင်းပြသည်
CTV က Ultra-HD ကို OB ရေယာဉ်စုများအတွက်အဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်းမိတ်ဆက်
အသံလွှင့်အပြင်ဘက်တွင် CTV, ယူရို Media Group သို့ (တွေ့ရစဉ်) ၏လုပ်ငန်းခွဲ, မကြာသေးမီကစံအဖြစ် axon synapses 4K ဆစ်ဂနယ်, အခြေခံအဆောက်အအုံများ, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး featuring, က Ultra-HD ကိုရန်၎င်း၏ကြီးမားသောအထင်ကရ OB ယူနစ်သုံးခုများ၏ပြင်ဆင်ပေးခြင်းနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးစီးခဲ့သည်။2အတွက် OB11 နှင့် OB2017 ၏အောင်မြင်သောပွဲဦးထွက်ပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သော Wight ပွဲတော်များ၏ကျွန်းအဖြစ်မှတ်တိုင် 4K ဖြစ်ရပ်များပို့ ...
IPE Technologies ကအတူအဖော်မှ Densitron နှင့်အမေရိကန်အတွက်၎င်း၏ဦးစီးဗြိတိန်နှင့်ဥရောပအသံလွှင့် Software များကိုထောကျပံ့
စတူဒီယိုအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏တစ်ဦးပွဲစဉ်အတွက် hardware နှင့် software ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ကဖွင့် (NAB, Las Vegas မှာ, 7th - 12th ဧပြီလ 2018) ကိုအမေရိကန်ထုတ်လွှင့်ယခု IDS, အသစ်တခုသည်အောက်ပါအင်္ဂလန်ရဲ့ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ပေးသူတဦးကနေတစ်ဦးပြည့်စုံလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်မှတိုက်ရိုက် access ကိုရလိမ့်မည် မိတ်ဖက်ရှေ့ဆက်ယခုနှစ် NAB ရှိုးများကြေညာခဲ့သည်။ Densitron (C9032 ရပ်), display ကိုတစ်ဖန်တီးသူ ...
ရာထူး: Motion Graphics ဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီ: Cineteller Productions တည်နေရာ: ပျော်စရာ-မေတ္တာရှင်အဖွဲ့အပေါ် San Jose, CA အမေရိကန်လုပ်ငန်းခွင်အရည်အသွေးမြင့်ကိုဖန်တီးရန်, ကော်ပိုရိတ်ကိုဗီဒီယိုစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ကို Adobe တူသောအစီအစဉ်များကို အသုံးပြု. ပြောင်းလဲနေသောရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်။ ငြိမ်ဂရပ်များ, ဇယားများနှင့်နံပါတ်များကို boring မှ pizzaz ထည့်သွင်းဖို့စာသားနဲ့ဂရပ်ဖစ်လှုပ်ရှားပုံများ။ တိုက်ရိုက်လွှသို့ဆွဲသွင်းပါဝင် / မှုကြီးလျှော့ချ / ဖွဲ့စည်းမှုအဘို့အ PNG ပုံပာအဖြစ်တင်ပို့အလုပ် ...
SXSW မှာ Panavision Panel ကိုမှာအလှအပ 8K ၏အကြီးစား Format ကို Explore
Panavision, မှန်ဘီလူးများနှင့်ကင်မရာစနစ်တွေအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင် 8 မှာမတ်လ 13 အပေါ် SXSW မှာမျက်စိ-ဖွင့်တင်ဆက်မှုအတွက် 11K ကြီးမားတဲ့ပုံစံ၏ဂုဏ်အသရေကိုစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်: အ Vimeo ပြဇာတ်ရုံမှာ 00 နံနက်။ အဆိုပါအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုမှတက်ရောက် Full-frame ကိုပုံရိပ် devices များနှင့်ကြီးမားသော-format ကိုမှန်ဘီလူးအကြား symbiotic ကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူမည်, မည်သို့အဲဒီကိရိယာထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုင်ပါတယ် ...
နယူး JVC PTZ ထုတ်လုပ်မှုကင်မရာများကို RiversideTV အဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေး
ဝိန်း, NJ - ။ JVC Professional ကဗီဒီယို, JVCKENWOOD အမေရိကန်နိုင်ငံကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနခွဲ, ယနေ့, RiversideTV Riverside မှ, ကာလီဖိုးနီးယား၏စီးတီးများအတွက်အစိုးရလက်လှမ်းရုပ်သံလိုင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ၏ Multi-ကင်မရာလွှမ်းခြုံများအတွက် 10 JVC KY-PZ100 PTZ ကွန်ယက်ကိုဗီဒီယိုကထုတ်လုပ်မှုကင်မရာများဝယ်ယူထားပြီး အစိုးရအစည်းအဝေးတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာ programming ကို။ တစ်ဦးကသက်တမ်းကြာ JVC ဖောက်သည်, RiversideTV လည်းမကြာသေးမီက GY-LS300 4KCAM စူပါ 35 ကင်မရာများနှင့် GY-HM200SP အားကစားထည့်ပြီးပါပြီ ...
Sigma Sony က e-တောင်ပေါ်ကကင်မရာများကိုများအတွက် interchangeable lens လွှတ်တင်; မိတ်ဆက်အမှတ်တံဆိပ်နယူး 105mm F1.4 အနုပညာနှင့် 70mm F2.8 Macro အနုပညာမှန်ဘီလူး; Firmware V2 ကို Canon ထစ်အငေါ့ပြင်ဆင်ခြင်းများအတွက်ဖြန့်ချိ
Sigma ကော်ပိုရေးရှင်းကယနေ့အောက်ပါကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း: အတူကို Canon ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာများများအတွက် Sigma 105mm F1.4 DG အနီးကပ် HSM အနုပညာနယူး firmware ကိုဗားရှင်း 70 ၏ Sigma 2.8mm F2.00 DG HSM အနုပညာနိဒါန်း၏ Full-frame ကိုအာရုံခံနိဒါန်းနှင့်အတူ Sony က E-mount ကင်မရာစနစ်တွေများအတွက်လဲလှယ်မှန်ဘီလူး၏ Launch Sony က e-တောင်ပေါ်မှာအပြည့်အဝ-Frame ကကင်မရာများကို Sigma ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်မှန်ဘီလူးထစ်အငေါ့ပြင်ဆင်ခြင်း Sigma interchangeable lens တဖြည်းဖြည်းအောက်ပါအနုပညာမှန်ဘီလူးမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ် ...
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်းကြေညာ
WESTFORD, Mass - ။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2018 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ, ဆန်းသစ် Real-time မာလ်တီမီဒီယာပေးပို့ဖြေရှင်းချက်၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသည် SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်း™ကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်။ အဆိုပါ SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်းလေးရုပ်သံလိုင်း, Auto-အသိ, 3G / HD ကို / SD က-SDI-over-IP ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်အနေနဲ့ပေါင်းစပ်, nonblocking အလွှာ2/3switch ကိုအတူဘက်စုံသုံးတံခါးပေါက်။ အဆိုပါ SMART ပလက်ဖောင်းရဲ့ IP ကွန်ယက်ချောမွေ့စွာပူးတွဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးပါပြီ ...
3 ၏စာမျက်နှာ 86«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»